समुदायमा फैलिँदै यूके भेरियन्ट : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ३ समुदायमा फैलिँदै यूके भेरियन्ट
संक्रमणको दोस्रो लहर
– बालबालिका प्रभावित
– ६०३ संक्रमितमध्ये ५२ जना १७ वर्षमुनिका
– आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिँदै
– अधिकांश विद्यालय पालना गर्दैनन् मापदण्ड
धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभागका निर्देशक डा. विराज कर्माचार्यका अनुसार भारतमा संक्रमणदर उच्च रहेको भन्दै नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउन सक्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बालबालिका नयाँ भेरियन्टको जोखिममा छन् । भेरियन्ट समुदायमा फैलिरहेको भन्दै परीक्षण गराउन जनस्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा ‘डबल म्युटेसन भेरियन्ट’ कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार हङकङमा पठाएको नमुना परीक्षणमा ‘डबल म्युटेसन भेरियन्ट’ पुष्टि भएको छ ।
सरकारले नेपालमा नयाँ प्रजातिको भारइस फैलिएको हुन सक्ने भन्दै ‘जिन सिक्वेन्सिङ’का लागि नमुना हङकङमा पठाएको थियो । ‘एस जिन नेगेटिभ’ भएका १० नमुनामध्ये ९ वटामा ‘यूके भेरियन्ट’ पुष्टि भएको हो ।
‘डबल म्युटेसन पुष्टि भएको नमुना ललितपुर जिल्लाको हो,’ डा. पौडेलले भने, ‘यसबाट पनि नेपालमा यूके भेरियन्ट फैलिसकेको पुष्टि हुन्छ ।’ बुधबार नै देशभर ६ सय ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार ५ सय ८० जना पीसीआर र २३ जना एन्टिजेन पोजेटिभ आएको हो ।
बुधबार देशभर ४ हजार २ सय ८९ जनाको नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट र ४ सय ५१ जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । सक्रिय संक्रमित संख्या ४ हजार ५६ पुगेको छ । देशभरका विभिन्न अस्पतालमा ८० आईसीयू र २५ संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन् ।
कुल संक्रमितमध्ये २ सय ५४ मात्र काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ । भक्तपुरमा २०, ललितपुरमा ६१ र काठमाडौंमा १ सय ७३ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हालसम्म कुल संक्रमित संख्या २ लाख ८१ हजार ५ सय ८७ जना पुगेको छ । गत २४ घण्टामा तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतक संख्या ३ हजार ६१ पुगेको छ । देशभर ७९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमितमध्ये १ सय २९ डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या २ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ पुगेको छ ।
प्रदेश प्रशान्त वली - May 7, 2020 0
प्रदेश ६ प्रशान्त वली - December 17, 2020 0
Breaking News प्रशान्त वली - April 29, 2020 0
काठमाडौं । थर्मल गनलगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उद्योगी सुलभ अग्रवालको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेदै बिहीबारका लागि सरेको छ । जिल्ला अदालत...
Editor-Picks प्रशान्त वली - February 24, 2020 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - May 11, 2020 0
प्रदेश ५ प्रशान्त वली - May 26, 2020 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - March 6, 2020 0
Not-to-be-missed प्रशान्त वली - June 6, 2020 0
प्रदेश प्रशान्त वली - February 15, 2020 0
Breaking News प्रशान्त वली - January 30, 2021 0